Sida Si Fudud Loogu Nadiifiyo Fryer Koronto Talaabo Talaabo
Sida Si Fudud Loogu Nadiifiyo Fryer-ka Qoto dheer ee Korontada
Ma rabtaa inaad ka tagto shiilankaaga sida dayuuradaha dahabka ah? Qoraalkan waxaan kuugu sheegaynaa waxa ay tahay in aad samayso iyo waxa aanad samayn nadiifinta a shiilan koronto si fudud
Hor iyo horraanba
Dhammaan shiilanyadu isku mid maaha, waxay kuxirantahay nooca qalabka iyo nooca gaarka ah.
Waa lagama maarmaan akhri buuga, halkaas oo aad ka heli doonto macluumaadka ku saabsan qaybaha aad kala diri karto, kuwaas oo ku habboon mashiinka weelka iyo xitaa alaabooyinka ay tahay inaadan isticmaalin.
Qaar ka mid ah soosaarayaasha ayaa xitaa kuu sheegaya habka si habboon loo nadiifiyo qalabka, iyo sidoo kale inta jeer iyo dayactirka lagama maarmaanka ah ee filtarrada iyo qalabka kale.
Weligaa ha samayn nadiifinta iyadoo shiilan lagu shubay dhexda dhexe, waa khatar.
Si joogto ah u nadiifi Waxay ka hortagtaa dufanka iyo qashinka inay ururaan taas oo hadhow adkeyn doonta hawsha. Waxaa habboon in la dhaqo mar kasta oo aad beddesho saliidda mid nadiif ah.
Hadda waxaan raacnaa tillaabooyinka si aan uga tagno dhalaal oo diyaar u ah inuu shiilo.
Iyada oo saliidda qabow iyo mashiinka la furay baaldiga ku shub weel ku habboon, ha ku tuurin saxanka hoostiisa. Si loo sameeyo adoon daadin, a maro leh shaandho si loo kala saaro wasakhda aad tuuri karto.
Ku qooya Biyaha khalka
Haddii weelku leeyahay haanta la guuri karo, waxaan kugula talineynaa inaad ka saarto, geliso dambiisha iyo filtarrada la dhaqi karo haddii aad haysato oo ku buuxi xagga sare biyo aad u kulul iyo jet wanaagsan oo khal ah. Kadibna ha nasato ilaa 15/20 daqiiqo intaad nadiifinayso qaybaha kale sida daboolka ama jidhka qalabka.
Haddii aadan kala diri karin haanta, ku buuxi isku dar isku dar ah iyo dambiisha gudaha ku jirta oo u shid mishiinka 15 daqiiqo oo awood badhkeed ah si aanay biyuhu u karkarin.
Ka dib markaad u ogolaato inuu qoyo, ku nadiifi dambiisha a makiinada ama burushka caaga ah iyo makiinada weelka dhaqda Ama ku rid makiinada weelka dhaqda ka hor intaysan engegin mar kale. Haddii ay leedahay hadhaagii dhegdhegnaa, wax yar ayaad buufin kartaa dufan ka saara meelaha ugu wasakhsan.
Ka dib marka la qooyo, haddii ay tahay mid la saari karo, ma jiraan wax la mid ah gelinta weel dhaqida. Haddii kale isticmaal a isbuunyo leh weel dhaq si looga saaro dhammaan wasakhda. Aad bay muhiim u tahay in si fiican loo saaro dhammaan hadhaaga saabuunta adigoo gudbinaya kubbad qoyan oo la maroojiyay inta jeer ee loo baahdo. Ugu dambeyntii, waxaad ku qallajin kartaa tubbada maro engegan iyo ugu dambeyntii warqad yar oo jikada ah.
Haddii weeliyahaagu leeyahay filtarrada la dhaqi karo, sii wad sida dambiisha.
Resistors marka hore isticmaal a warqad jikada, ka dibna ku nadiifi suufka wax lagu xoqo iyo saabuunta saxanka adigoon si adag u xoqin. Ka saar dhammaan haraaga saabuunta maro nadiif ah oo qoyan.
Daboolka dibedda iyo Fryer.
Dibadda iyo daboolka waa inaad sidoo kale marka hore u gudubtaa warqad jikada oo nuugta. Kadib isticmaal a kubad lagu qooyay biyo saabuun ah in lagu dhameeyo kubbad kale oo lagu qooyay biyo nadiif ah.
Haddii daboolku yahay mid la saari karo, waxa fiican in la raaco habka isku midka ah ee cuvette si loo helo natiijooyin wanaagsan.
⭐ Fryer Saliid la'aan ah » Sida Si Fudud Loogu Nadiifiyo Fryer-ka Qoto dheer ee Korontada